Xiaomi Mi A1 dị ụkọ mana ha amalitela ịnata Android 8.0 Oreo | Akụkọ akụrụngwa
O yiri ka ọ bụ ihe ijuanya na ngwaọrụ siri ike inweta ugbua akwadebela ma ọ bụ na-anata mmelite nke Android 8.0 Oreo sistemụ arụmọrụ. Na nke a, ndị nwere ihu ọma nwere ngwaọrụ ọhụụ sitere na ụlọ ọrụ ndị China nwere ike ịmalite ibudata ụdị ọhụrụ nke sistemụ Google.
The ihe ọma banyere inwe ngwaahịa gam akporo Ọ bụ kpọmkwem nke a, na ozugbo ụdị ọhụrụ nke sistemụ ahụ dị, ọ gaghị ewe ọtụtụ ụbọchị ruo mgbe ndị ọrụ nke ngwaọrụ ha malitere ịnata ya. Ihe banyere Xiaomi Mi A1 abụghị otu ma ha amalitelarị imelite dịka ụfọdụ ndị ọrụ si dị.
Na nke a ọ bụ nke mbụ beta Gam akporo O nke a na-eziga ndị ọrụ nke njedebe Xiaomi ndị a, mana nke a pụtara na akụkọ anyị hụrụ na usoro a kachasị ọhụrụ ga-adị maka ụdị Xiaomi a.
Obere ihe karịrị 1GB ohere bụ ihe beta mbụ a na-abịakwute anyị GSM Arena na nke ahụ ga-abụ ọ joyụ nke ọtụtụ ndị ọrụ na olileanya nke a ozugbo ukara update maka ndị ọzọ. Ma na ụdị beta adịghị erukarị ndị ọrụ niile, mana ozugbo ebupụtara ya enwere obere oge iji wepụta ya ma ọ bụrụ na ihe niile ziri ezi.
Enwere olile anya na ndị ọrụ gọọmentị ga-abịarute tupu njedebe nke afọ a 2017 ọ bụkwa ihe ụlọ ọrụ ahụ n'onwe ya dọrọ aka ná ntị ogologo oge gara aga. Anyị ga-echere ịhụ ihe ga-eme tupu njedebe nke afọ a ma ọ bụrụ na ọ bụ eziokwu na ha ga-abịa n'oge iji mejuputa ya na mbụ Xiaomi gam akporo One.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » Xiaomi Mi A1 dị ụkọ mana ha amalitela ịnata Android 8.0 Oreo
Apple nwere ike gbanwee batrị iji mebie arụmọrụ ha
Ekweisi kachasị mma nke 2017